As of Thu, 02 Jul, 2020 20:50
दाङ-जिल्लाको १० स्थानीय तहमध्ये घोराही उपमहानगरपालिकामा धेरै उद्योगहरू छन् । घोराही उपमहानगरपालिकामा ५ हजार २ सय १९ वटा प्रतिष्ठान छन् । नेपालमा पहिलो पटक गरिएको राष्ट्रिय गणना २०७५ नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो । नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तुलसीराम पोख्रेलले जिल्लामा १४ हजार ४ सय २१ वटा प्रतिष्ठानहरू रहेको जानकारी दिए ।
यी हाल जिल्लामा सञ्चालन साना तथा ठूला उद्योगहरूको संख्या रहेको पोख्रेलको भनाइ छ । जिल्लामा रहेको प्रतिष्ठानमध्ये ७ हजार ९ सय ३ वटा मा दर्ता भएका छन् । भने ६ हजार ५ सय १८ वटा दर्ता नभएको पोख्रेलको भनाइ छ । गणना २ महिनासम्म फिल्ड खटिएर लिएको जानकारी दिए । २०७५ वैशाख महिनादेखि जेठ महिनासम्म तथ्याङ्क लिएको थियो । जसमा प्रश्नावली निर्माण गरेर डाटा संकलन गरिएको उनको भनाइ छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी घोराहीमा र सबैभन्दा कम राजपुर गाउँपालिकामा रहेको उनको भनाइ छ ।
घोराहीमा रहेका ५ हजार २ सय १९ प्रतिष्ठानमध्ये ३ हजार ८० वटा दर्ता भएर सञ्चालन गरेको पाइएको छ भने २ हजार १ सय ३९ वटा राज्यका निकायमा दर्ता हुन नसकेको तथ्याङकमा उल्लेख गरिएको छ । तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकामा ३ हजार ६ सय ८८ वटा छन् । जसमा १ हजार ९ सय ७७ वटा मात्र दर्ता भएका छन् भने १ हजार ७ सय ११ वटा दर्ता नभएको पाइएको छ । लमही नगरपालिकामा १ हजार ३ सय ४३ वटा उद्योग रहेकोमा ७ सय ६२ दर्ता भएका छन् भने ५ सय ८१ वटा दर्ता नभएको पाइएको छ ।
त्यसैगरेर बंगलाचुली गाऊपालिकामा ३ सय ८७ वटा प्रतिष्ठानमध्ये १ सय ५६ वटा दर्ता भएको र २ सय ३१ वटा दर्ता नभएको सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकामा ४ सय ७४ प्रतिष्ठानमध्ये १ सय ७९ दर्ता भएका र २ सय ९५ दर्ता भएका छैन । बबई गाउँपालिकामा ५ सय ४ प्रतिष्ठानमध्ये २ सय ४ दर्ता भएको र ३ सय दर्ता नभएका रहेका छन् । दगीशरण गाउँपालिकामा ३ सय ६० प्रतिष्ठान रहेकोमा १ सय ३२ वटा दर्ता भएका र २ सय २८ दर्ता नभएका छन् ।
यसैगरेर राप्ती गाउँपालिकामा १ हजार २ सय १८ मध्ये ७ सय ९१ वटा दर्ता भएका र ४ सय २७ वटा दर्ता नभएका छन् । गढवा गाउँपालिकामा ९ सय ५ वटामध्ये ४ सय ८० वटा दर्ता भएका र ४ सय २५ वटा दर्ता नभएका छन् । राजपुर गाउँपालिकामा ३ सय २३ वटा प्रष्ठिान छन् । जसमध्ये १ सय ४२ वटा दर्ता भएका र १ सय ८१ वटा दर्ता नभएको सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लामा पछिल्लो समय उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना हुने क्रम बढेको समेत तथ्याङ्कले देखाएको छ । वि. सं. २०७० सालदेखि २०७५ साल जेठसम्म ९ हजार १ सय ५९ वटा थपिएका हुन् ।
जिल्लामा विं सं. २०६० साल देखि २०६९ सालसम्म ३ हजार ६ सय ९७ वटा थपिएका थिए । त्यसैगरेर विं सं. २०६० भन्दा अघि १ हजार ३ सय ५४ वटा स्थापना भएका थिए भने सञ्चालन मिति नै थाहा नभएका २ सय ११ वटा रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । यस तथ्याङ्कले जिल्लामा आर्थिक विकास वृद्धि हुँदै गएको पाइएको प्रमुख पोख्रेलले बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले तथ्याङ्कले जिल्लाको आर्थिक अवस्थावारेमा जानकारी लिन सहयोग पुगेको बताए । काम गर्दा भएका कमिकमजोरी सच्चाएर अगाडि वढनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालले पछिल्लो समय व्यवसायीहरू वृद्ध हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको बताए । उनले दर्ता नभएका व्यवसायीहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनका लागि संघले प्रयास जारी राखेको बताए ।